उम्मेदवारी दिन शिक्षकबाट राजीनामा दिए खुमबहादुरले – Gulmiews
७ जेष्ठ २०७४, आईतवार १६:२७ गुल्मिन्युज
गुल्मी, जेठ ७ । ३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि गुल्मीमा एक शिक्षकले शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएर वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं. १३ स्थित श्री घोर्ले मावि दुबिचौरमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षक खुमबहादुर खत्रीले शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेसबाट वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका हुन्।
विगत १८ वर्षे लामो शिक्षण पेसालाई विश्राम दिँदै नेपाली कांग्रेसबाट रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नं. १३ को वडा अध्यक्षमा उम्मेदवार दिँदै छन्। शिक्षण पेसाबाट समाजसेवामा समर्पित खत्रीले जनताको सेवाको निम्ति वडा अध्यक्षमा उम्मेदवार दिने निर्णय गरेको बताए। समाज परिवर्तन र समाज सेवा मेरो मुख्य लक्ष्य हो उनले भने, ‘त्यसको निम्ति युवा अग्रस्थानमा आउनुपर्छ।’ लामो समय सम्म शिक्षण सेवामा रहे पनि समाज सेवाको निम्ति आप्mनो उम्मेदवारी रहेको बताए। विभिन्न संघ संस्थामा रहेर विभिन्न जिम्मेवारी समालेर अनुभव संगालेका खत्री लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गुल्मीको अध्यक्ष हुँदा नेपालकै उत्कृष्ट शाखा बनाउन सफल भएका थिए। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल सांस्कृति संघ जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिसमेत रहेका युवा नेता खत्री पार्टीका विभिन्न संगठनमा रहेका काम गरेका थिए। पा पार्टीको कामसँगै समाज सेवाको निम्ति विभिन्न संघ संस्थाको मुख्य भूमिकामा रहेर काम गर्र्दै आएका खत्री उक्त वडामा लोकप्रिय युवा नेता हुन्। उनले उक्त वडामा निर्वाचनमार्फत भारी मत ल्याएर विजयी हुने दाबी गरे। के छन् जित्ने मुख्य आधारहरु?
विगतदेखि नै कांग्रेसको बलियो आधारको रुपमा रहेको उक्त वडा हाल पनि कांग्रेसकै बाहुल्यता रहेको छ। पार्टाको बलियो संगठन रहनु र वडामा रहेर गरेका कामहरुबाट पनि स्थानीयहरु आफ्नो पक्षमा रहेको खत्रीको भनाइ रहेको छ। भोलि के गर्छुभन्दा पनि हिजो गरेका कामहरुको मूल्याङ्कन मतदाताले गरेर आफूलाई मत दिने विश्वास गरे। चुनावमा हुने सस्तो नाराभन्दा पनि हिजो गरेका कामको मूल्याङ्कन र भावी दिनमा गरिने कामहरुको निम्ति पनि मतदाताहरुले आफनो नेतृत्व चाहेको बताए। उनले भने, ‘मैले विगतमा गरेका कामको आधारमा जनताले यसपालि मलाई विजयी गराउनेछन् भोलि मैले जनताको मन जित्न नसके अवश्य बाहिराउने छन्।’ गुल्मी जिल्लाको कम मतदाता भएको वडामा कांग्रेसबाट सम्भवत कान्छा उमेरका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् ।